Gantaaladan ‚halista ah‘ ee Turkiga iyo welwelka ay Reer Galbeedku ka qabaan. – Xeernews24
Gantaaladan ‚halista ah‘ ee Turkiga iyo welwelka ay Reer Galbeedku ka qabaan.
Tan waa waxa aad usii lulaya Maraykanka, sababtoo ah Turkiga waxa uu doonayaa in uu hawlgaliyo diyaaradaha F-35 ee uu Maraykanka sameeyay, taas oo Ruushiyaanka ay ogaan karaan sirta ku saabsan samayskeeda.
Intaas oo kaliya kuma eka arrimaha, haddii Turkiga uu ku adkaysto go“aankiisa, waxaa su’aal la galin doonaa xubinimadeeda NATO.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/07/S-400.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-10 20:41:452019-07-10 20:41:45Gantaaladan 'halista ah' ee Turkiga iyo welwelka ay Reer Galbeedku ka qabaan.
Madaxweyne Farmaajo oo Warqadaha Aqoonsiga ka gudoomay Danjiraha cusub ee dalka... France ma laga raystay mise wa loo darsaday?